Netizen Report: Mijery lalàna vaovao hanakanana ny fahalalaham-pitenena ireo mpanao lalàna Israeliana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jolay 2018 5:59 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, русский, Português, Français, English
Fahatsiarovana ho an'ireo niharam-boina tany Gaza, notontosaina tao ivelan'ny ambasady Palestiniana tany Bucarest. Sary nalaina tao amin'ny @RomaniaPalestineSolidarity ao amin'ny Facebook.
Manosika volavolan-dalàna marobe ireo mpanao lalàna Israeliana izay mety hametra ny lahatenin'ireo mpikatroka sy mpanao gazety manakiana ny politikany ao amin'ny faritany Palestiniana bodoin'ny Israeliana.
Hametraka famerana amin'ny fakàna sarimihetsika sy ny saripika ny Tafi-piarovana Isiraeliana (IDF) ny volavolan-dalàna, manome sazy an-tranomaizina mandritra ny dimy taona ho an'izay rehetra voampanga amin'ny “fakàna horonantsary, sary, sy/na fandraketam-peo atao amin'ny miaramila mandritra ny asan'izy ireo, miampy fikasana hanohintohina ny sain'ny miaramila IDF sy ny mponin'i Israely. “Raha manapa-kevitra ny fitsarana fa ny hanohintohina ny fiarovam-panjakana [ Israeliana] ny fikasan'ny mpaka sary, “dia mety hihitatra hatramin'ny folo taona an-tranomaizina ny sazy.
Ny “fandraràna Fakàna sary sy Fandraketana ny Miaramila IDF” dia manameloka ny famoahana ireo sary na lahatsary amin'ny tambajotra sosialy sy ny fampahalalam-baovao mahazatra ihany koa.
Ny volavolan-dalàna faharoa dia manatsara ny dingana ho an'ny manampahefam-panjakana mba hitaky amin'ireo sehatra media sosialy hanaisotra votoaty antserasera hita fa “mitarika herisetra”, ary vonona ho ankatoavin'ny Knesset izany.
Ny soso-kevitra fahatelo, Volavolan-dalàna Fiarovana Antserasera sy ny Toro-lalana Antserasera Nasionaly, dia niteraka fananganana vondrom-panjakana hisahana ny famantarana sy fanaraha-maso ny fandrahonana ny fiarovana antserasera. Ny volavolan-dalàna dia hanome fahefana ho an'ity vondrona ity mba hiditra (hijirika amin'ny) amin'ny fitaovana manokana na an'ny fikambanana ary hanaisotra angon-drakitra avy amin'izy ireo, tsy mila fankatoavana mialoha avy amin'ny fitsarana izany.
Araka ny filazan'i Nadim Nashif, tale mpanatanteraka ao amin'ny Ivon-toerana Arabo ho an'ny fampandrosoana ny Media sosialy (7amleh), any Haifa, “nampiharina foana tamin'ireo Palestiniana” ny fahefan'ny vondrona hijirika ireo fitaovana sy haka tahiry an-keriny. Milaza i Nashif fa miezaka hametraka izany fomba fanao izany ho ara-dalàna ny governemanta ankehitriny.
Nidina an-dalambe – sy nitory eny amin'ny fitsarana — ny Ogandey mba hanafoana ny hetra amin'ny media sosialy
Nidina an-dalambe tao Kampala tamin'ny 11 Jolay ireo impanao hetsi-panoherana, nitaky ny famaranana ilay antsoina hoe “hetra amin'ny media sosialy” ao Oganda, izay mametraka hetra amin'ny fampiasana ireo tranonkala 58 isan-karazany, anisan'izany ny WhatsApp, Twitter ary Facebook. Nitatitra ireo mpanao fihetsiketsehana fa nandrava ny fihetsiketsehana ny polisy tamin'ny fampiasana baomba mandatsa-dranomaso sy hery ara-batana, ary maro ireo mpanao fihetsiketsehana nosamborina. Nitory ny governemanta teny amin'ny fitsarana noho ity resaka hetra ity ihany koa ireo mpanao fanangonan-tsonia, milaza fa manitsakitsaka ny lalàmpanorenan'i Oganda sy ny adidiny amin'ny zon'olombelona izany.
Bobi Wine, mpihira malaza, no feo manentana amin'ny hetsi-panoherana eny an-dalambe sy ao amin'ny Twitter, ary nisioka izy hoe:
… tsy misy bala, etona mandatsa-dranomaso na fisamborana hanakana antsika. Nodarohana ny sasany tamin'ireo namantsika ary nosamborina ny sasany. Tokony havotsotra izy ireo satria tsy manana na inona na inona amin'ny polisy, fa ny hetra mahatsiravina.
Nandefa lahatsary misy ny fiaikena noterena nataon'ireo gadra Instagram i Iran
Tamin'ny 9 Jolay, nandefa lahatsary ahitana andiana fiaikena noterena nataon'ireo Iraniana telo malaza mpisera Instagram ny Tambajotra fampielezan-tsarin'ny Repoblika Islamikan'i Iran, nogadraina nanomboka tamin'ny fiandohan'ny volana mey 2018 izy ireo noho ny famoahana horonantsary misy ny tenan'izy ireo manao “hetsika tsy ara-dalàna” tahaka ny mandihy. Niteraka tabataba be ny fisamborana sy ny fiaikena taty aoriana.
Lehilahy Kenyana nosamborina noho ny fiantsoana mpitarika ao amin'ny governemanta ho “mpivavaka amin'ny devoly”
Lehilahy iray no nosamborina teo ambanin'ny lalàna vaovao momba ny heloka antserasera ao Kenya noho ny lahatsoratra tao amin'ny Facebook izay nanoritsoritany ny mpanao lalàna ao an-toerana ho “mpivavaka amin'ny devoly”. Araka ny filazan'ny Talen'ny Fanadihadiana Heloka Bevava (DCI) Zachary Kariuki, nilaza ihany koa ilay lahatsoratra fa “ny Senatera Ledama ole Kina dia voalaza fa nivarotra ny fanahiny tamin'ny “devoly” ary ny MCAs no alika mivovòn'ny mpanatanteraka. “
Nanagadra lehilahy noho ny tsy nahavitany nanokatra ny findainy ny fitsarana Amerikana
Rehefa avy nisambotra an'i William Montanez noho ny heloka kely tamin'ny fanitsakitsahana ny lalàm-pifamoivoizana, nikaroka ny fiaran'i Montanez ny mpitandro filaminana tany Etazonia, Florida ary nahita sy nandraoka marijuana kelikely sy ny findainy anankiroa, izay nampisehoan-dry zareo tany amin'ny fitsarana, miaraka amin'ny didy fikarohana. Rehefa nangataka tamin'i Montanez mba hanokatra ny findainy ny mpitsara, dia tsy nety nanao izany izy ary nogadraina 180 andro. Bilaogera ao amin'ny TechDirt, Tim Cushing namaritra ity tranga ity ho toy ny “fanjonoana” izay mety hiafara amin'ny “fanagadrana an'i Montanez amin'ny fotoana tsy voafetra any am-ponja kanefa tsy voampanga ho meloka tamin'ny heloka bevava”. Nampiakatra ny raharaha ny mpisolovavany
Mpisioka Ekoadaoreana niharan'ny fiatoana fanintelony noho ny fenesoesoana
Naaton'ny Twitter fanintelony tamin'ity herinandro ity ny kaonty Twitter mpanesoeso Crudo Ecuador (@CrudoEcuador4 amin'izao fotoana izao), fanta-daza amin'ny fanehoan-kevitra sy famazivaziana ny filoha Ekoadaoreana teo aloha, Rafael Correa. Ny mpitantana ny kaonty, izay niresaka tamin'ny ONG eo an-toerana, Usuarios Digitales, nizara ny pikantsarin'ilay fampandrenesana nalefan'ny Twitter, izay nilaza fa naato ny kaonty noho ny “fanehoana toetra mifanaraka amin'ny mandeha ho azy” (na hetsiky ny raboto), na dia tantanin'ny tena olona aza ny kaonty, ary nandefa ny lahatsoratra orizinaly. Ny fiatoana dia mety anisan'ny ezaky ny Twitter hanafoana ny raboto sy ny kaonty hosoka hafa.
Manenjika ny fankahalana ao amin'ny media sosialy i Honduras
Mieritreritra hanolotra volavolan-dalàna momba ny heloka antserasera sy ny kabarim-pankahalàna ireo mpanao lalàna ao Honduras, izay mety hanery ireo mpandraharahan'ny tranonkala mba hanakana na hametra “votoaty tsy ara-dalàna” sy “lahateny manavakavaka” ao amin'ny tranokalan'izy ireo. Ny tsy fanarahana ny lalàna dia mety hitarika fandoavana onitra hatramin'ny 42.000 dolara Amerikana. Nangataka fanazavana fanampiny momba ny lalàna tamin'ny governemantan’ Honduras ny Iraka Manokan'ny Firenena Mikambana, David Kaye sy ny Iraka manokana momba ny Zon'olombelona ao amin'ny Vaomiera Iraisan'ny Samy Amerikana, Edison Lanza, ary mandrisika ireo mpanara-baovao ny Access Now mba hisioka momba ny voka-dratsin'ny lalàna eo amin'ny fahalalaham-pitenenana.
Nahoana no mihitsoka foana ny iPhone-ko rehefa mitendry ny hoe “Taiwan” aho?
Efa dimy volana latsaka izay ny Apple no nivarotra ny orinasany foiben-tahiry ao amin'ny Shina tanibe tamin'ny orinasam-panjakana Guizhou-Cloud Big Data. Tamin'ny herinandro lasa teo, niteraka ahiahy teo amin'ireo mpampiasa Apple ny “bug” manelingelina ao amin'ny rindrambaikon'ny iPhone fa manaiky ny fitakian'ny governemanta Shinoa ny orinasa. Araka ny voalazan'i Patrick Wardle, mpikaroka momba ny fiarovana an'aterineto, nihitsoka ireo maodely iPhone sasany misy teny Shinoa sy toerana ao Shina rehefa mitendry ny hoe “Taiwan” na mandray hafatra miaraka amin'ny emoji sainam-pirenena Taiwaney. Namoaka ny endrika farany iOS version 11.4.1 mba hamahana ny olana ny Apple.
Afef Abrougui, Ellery Roberts Biddle, Nwachukwu Egbunike, Mohamed ElGohary, Weiping Li, Mong Palatino, Elizabeth Rivera, Laura Vidal, sy Sarah Myers West no niara-nanorata ity tatitra ity.